Wargeyska Gobollada Dhexe - Luulyo 2015 by Wargeyska Gobollada Dhexe - Issuu
WARGEYS BILLE AH, KANA SOO BAXA MAGAALADA DHUUSA MAREEB Arbaco, 01 luulyo 2015, Cadadka 028-aad, Sanadka 3-aad
MARXALADAHA DHISMAHA MAAMULKA GOBOLLADA DHEXE EE GALMUDUG
Wada tashiga dhismaha maamulka Gobollada Dhexe, waxay billaabatay sanadkii 2013dii. Shirar ka kala dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa lagu lafaguray arrintaa. Horraantii sanadkii 2014ka ayaa shir aan loo kala kicin ka dhacay magaalada Muqdisho, oo ay ka soo qaybgaleen odoyaasha dhaqanka, aqooliyayaasha, ganacsata iyo ururrada bulshada Gobollada Dhexe...ka sii akhri bogga 2aad.
SICIR BARAKA BISHA SOON IYO CABASHADA DADWEYNAHA
QORAALLO KALE MAXAAD KA TAQAAN CUDURKA CAGAARSHOWGA? W/Q: Ramieza Mahdi ...bogga 3aad.
Ganacsatada suuqyada Soomaaliya, ayaa qiimaha cuntada daruuriga ah sida Burka, Sonkorta, Saliidda, Bariiska, Khudaarta, Timirta, Hilibka iyo Caanaha, kor u qaada Xilliga Bisha Barakeysan ee Rabadaanka. &quot;Qiimaha Cuntada ayaa si la dareemi karo kor ugu kacday markii loo fiiriyo bisha Soonka ka hor&quot; Ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada suuqa Bakaare, mar uu la hadlayay wargeyska Goballada Dhexe.
Qiimaha Cuntada ayaa kor u kacay in kastoo uu jiray codsi Rabadaanka ka hor uu Ganacsatada ka codsaday Madaxwayne Xasan Sheekh; inaysan qiimaha kor u qaadin &quot;Inaga oo soo dhawaynayna bisha Rabadaan, ayaan waxaan ka codsanayaa dhammaan ganacsatada in aysan kor u qaadin qiimaha cuntada daruuriga ah. Waxaan kale oo dhammaan...ka sii akhri bogga 3aad.
CALOOSHA IYO CAQLIGA KALA CELIYA W/Q: Xassan Kaafi Xalane ...bogga 4aad.
XADKA XURRIYADDA W/Q: C/raxmaan F. Xaashi
Cadadka 028-aad, Sanadka 3-aad
Arbaco 01, luulyo 2015
MARXALADAHA DHISMAHA MAAMULKA GOBOLLADA DHEXE EE GALMUDUG W/Q: Tifaftirka Wargeyska Wada tashiga dhismaha maamulka Gobollada Dhexe, waxay billaabatay sanadkii 2013dii. Shirar ka kala dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa lagu lafaguray arrintaa. Horraantii sanadkii 2014ka ayaa shir aan loo kala kicin ka dhacay magaalada Muqdisho, oo ay ka soo qaybgaleen odoyaasha dhaqanka, aqooliyayaasha, ganacsata iyo ururrada bulshada Gobollada Dhexe, ayaa bishii lixaad la isla qaatay in shir lagu qabto magaalada Cadaado.
barbar socday booqashooyinka madaxda dowladda, siyaasiyiin iyo dad rayad ah, oo daneynayay ka qeybgalka gogosha nabadeed, ee Caasimadda Galmudug ee Dusmo reeb. Xasuusin kaliya, gogoshada iyo madasha dib u heshiisiinta, oo ay ka qaybgaleen in ba-
shirka Dumso reeb la soo afjaro haddana, ma dhicin, oo odoyaasha ayaa codsaday in lagu daro todobo maalin. Maarso 7, 2015, waxaa mar kale, Dumso reeb soo gaaray wafti uu hogaaminayay RW Cumar Cabdirashiid, oo kulamma la qaatay imaatinkiisa kadib, qeybha kala duwan ee
Iyada oo loo ballansan yahay kulankaa ka dhici lahaa magaalada Cadaado, ayaa waxaa 27/07/2014tii dawladda iyo madaxa QM, ee dalka, waxay soo saareen in ay shirka loo qaban doono Gobollada Dhexe, saxiixna ka dhacay magaalada Muqdisho, oo laga saxiixay; Galmudug, Ahlusunno iyo Ximan iyo Xeeb, oo ah saddaxda maamul ee la aqoonsan yahay, ee ka jiray gobolka. Iyadoo shirkaa Cadaado loo ballansan yahay, ayaa waxaa xukuumaddii galay qalabqalab ah, in kalsoonida lagala laabanayo. Sidii loo hakiyey ayaan dib la isugu soo laaban. Markaa ka dib, ayaa 01/02/2015 waxaa magaalada Dusmo reeb ka furmay; shirka dib u heshiisiinta, Beelaha daga gobollada Galgaduud iyo Mudug. Shirka waxaa ka soo qeybgalay furitaankiisa madaxda dhaqanka labada gobol, siyaasiyiin iyo masuuliyiinta heer gobol ee dowladda dhexaba iyo xubnaha Ururada bulshada rayadka. 10/02/2015 waxaa magaalada Dusmo reeb, ee xarunta gobolka Glaguduud, ahna caasimadda maamulka Galmudug tagay MW dowladda Mudane Xasan Shiikh Maxamuud, wuxuuna ku dhawaaqay in uu furan yahay shirka dib u heshiisiinta labadda gobol. Odayaasha dhaqanka, Ugaasyada iyo siyaasiinta shirka, ayaa billaabay gudagalidda sheegadka; eed iyo isaayo mood iyo nool, wax dhow iyo wax fog wixii eed la kala tabanayay, ayaa la iskaga garaabay waxaa la qaatay kala daawoobid iyo is cafis. Waxaa maalin walba la soo bandhigayey beel beel laheshiisay iyo walaallo is cafiyey, oo isku sacab jiiday. Inta shirku socday, waxaa
dan shan boqol oo oday dhaqan, dhaqaale, qorshayn iyo hagidba, waxaa dusha u ridatay, beesha Dusmo reeb, oo aan gacan iyo garab midna ka helin shisheeye iyo sokeeye, hayâ&amp;#x20AC;&amp;#x2122;ado deeq bixin iyo dawladba. Run ahaan waxay eheed, guul taariikhi ah iyo muujin gobonnimo dhaqan guun ku ah Gobollada Dhexe, una baahan laga qaato casharro muhim ah. In kasta oo ay eheed, in
bulshada waxa uuna dhiirrigaliyay hamsami u socodka howlaha shirka, isaga oo ka mahadceliyay soo dhoweyntii ballaarneyd, ee loo sameeyay. Waxa uuna RW iyo waftigiisu u sii gudbeen Magaalada Gurceel, si ay u hakiyaan xiisad halkaasi ka aloosneed. Maarso 24, 2015, waxaa Magaalada Dusmo reeb oo wali uu shirkii ka socdo soo gaaray
Arbaco 01, luulyo 2015 wafti uu hoggaaminayo MW Mudane Xasan. Safarka madaxweynaha ayaa qaatay mudda laba cisha ah, waxa uuna ku laabtay MW Xasanu Magaalada Muqdisho Maarso 26, 2015. Abriil 8, 2015, waxaa mar kale magaalada Dusmo reeb soo gaaray wafti uu horkacayo MW Xasan, oo soo xiray shirkii dib u heshiisiinta beelaha daga gobollada Galguduud iyo Mudug, waxa uuna ku dhaqaay in Caasimadda Maamulka loo dhisayo labada gobol ay tahay “halkan Dusmo reeb” sidaana uu ku dhammaaday buuqii iyo dooddii ka taagneed magaalada xarun u noqonaysa maamulka Gobollada Dhexe. Sidoo kale, MW Xasan waxa uu iclaamiyay madasha rasmiga ah, ee maamul u samaynta Gobollada Dhexe, oo Cadaado ah. Abriil 14, 2015, waxaa magaalada Cadaado gaaray, MW Xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo, kulammo u badnaa qancinta odayaasha dhaqanka beelaha, ka dib, waxaa Abriil 16, 2015 Cadaado ka furmay shirka maamul u sameynta gobollada Galguduud iyo Mudug, waxaana shirkaasi daahfuray isla MW Xasan. Abriil 16, 2015, waxaa Cadaado gaaray wafadi uu horkacayo ergayga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay, ayna ku wehliyeen xubno ka socda Midowga Yurub, Wasiirkii hore, ee Xiriirka Caaalamiga ah Cabdulraxmaan Cabdulshakuur Warsame iyo xubno ka tirsan xafiisk QM, ee Muqdisho. Abriil 17, 2015 markii laga la
WARARKA furay shirka maamulka labada gobol, waxaa soo baxay taageerada caalamku u hayso geeddi socodka furitaanka madasha maamulka labada gobol. Qaramada Midoobay, IGAD, Midowga Yurub, AMISOM, Mareykanka, Ingiriiska, Sweden, Italy, Ethiopia, Uganda iyo Turkey ayaa soo dhaweeyay shirka maamul u sameynta Gobollada Dhexe. Saaxiibbada Beesha caalamka ayaa ku ammaantay dadka Gobollada Dhexe soo gabagabeynta shirkii dib u heshiisiinta Duso mareeb iyo sida ay uga go’antay in ay deegaanka ka dhacdo nabad iyo deganaasho. Waxay kaloo bogaadiyeen shirka Abriil 16, 2015 ka furmay magaalada Cadaado, wixii intaasi ka danbeysay, waxaa si aan kala go’ laheyn u socday habsami u socodka shirka. Duubabka dhaqanka beelaha, ayaa lahaa shirar aan kala kicin, waxaana sidoo kale, shirarka barbar socday booqashada wufuud kala gaddisan ee dowladda Soomaaliya iyo caalamkaba ah. Maajo 31, 2015 waxaa Magaalada Cadaado soo gaaray, wafdi uu hoggaaminayo RW Cumar Cabdirashiir, wuxuuna kulammo la qaatay qeybaha kala duwan, ee bulshada, madaxda dhaqanka iyo siyaasiyiinta. Sidoo kalana waxa uu RW shirka ka saaray ergadii ka socotay Waqooyiga gobolka Mudug. Maalin kadibna waxaa la soo xareeyay Ergo gaareysa 351 xubnood oo laga kala keenay beelaha daga labada gobol. Juun 17, 2015, waxaa ergadu ay ansixiyeen dastuurka uu yeelanayo Maamulka gobol-
CUDURKA CAGAARSHOWGA | W/Q: Ramieza Mahdi Xanuunka cagaarshawga (Hepatitis B) waa fayrus, ku dhaca beerka, ka dibna ku faafa jirka oo dhan, wuxuuna beerka ku sababaa xanuun isu badala in qofka uu dareemo dhibaato xagga beerka ah iyo guud ahaan noloshiisa. Xanuunka Cagaarshowga (Hepatitis B) waxaa qaba dadyow badan, oo dunida ku nool, wuxuuna aad ugu badan yahay waddammada soo koraya, ee qaaradda Aasiya iyo Afrika. Yurub waxaa inta badan lagu yaqaannaa
in ay xanuunkan qaadaan, dadka daroogada la isku mudo isticmaala, waxaana sabab u ah cirbadda la isku mudo oo ay wada isticmaalaan. Cudurka Cagaarshowga (Hepetitis B) fayruskiisu wuxuu beerka ka dhigaa xinjir, ilaa ruuxa xaaladdiisa caafimaad halis ka gaarto. Sidoo kale, waxaa jira in dadka uu fayrusku haleelo in xanuunka ay qaadaan iyagoo xanuunka ku sida dhiigga iyo dhacaanka aanay dareemin wax caafimaad darro ah, kadibna
lada Galguduud iyo Mudug, magaca maamulka, astaanta maamulka iyo Caasimadda lagu shaqeyn doono magaalada sy noqon doonto Magaca maamulka waxaa loo baxshay: GALMUDUG. Caasimadda maamulkana waxaa laga dhigay: Magaalada DUSMO REEB. Intaasi kadib waxaa billaabatay xulista baarlamaanka maamulka cusub, waxaana Juun 22, 2015 la soo xulay inta badan xubnihii matali lahaa baarlamaanka maamulka Galmudug. Xulidda ka dib, waxaa Cadaado soo gaaray wafti uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, oo ay la socdaan wasiiro iyo xildhibaanno, si ay uga qeybgalaan dhaarinta xubanaha xubnood Baarlamaanka Galmudug. Guddoomiye Jawaari, wuxuu halkaa ka yiri, hadal taariikhda galay, kuuna muujinaya, dadnimada reer Gobollada. Wuxuu yiri: “Galmudug, waa maamulka kaliya, ee ku dhismay, si wanaagsan, oo xalaal, aysanna ku jirin faragelin shisheeye!”. Juun 27, 2015 Baarlamanka Galmudug, waxa uu doortay guddoomiyaha baarlamaan iyo laba ku xigeen, oo kala ah; Cali Gacal Casir Guddoomiye, Xareed Cali Xareed G. ku xigeenka 1aad iyo Maxamed Maalin G. ku xigeenka 2aad. Baarlamaanka Galmudug, waxaa looga fadhiyaa Luulyo afarteeda in ay doortaan madaxweyne, oo ay ugu cadcadyihiin; Axmad Cabdisalaan, Axmad Fiqi iyo Cabdikariin Guuleed. Guul iyo gobonnimo. FARRIIN CAAFIMAAD waxaa dhacda in mustaqbalka dambe ku dhaco beer xanuun halis ah, kaas oo sababi kara mararka qaar geeri. Dadkaas qaba fayruska (Hepatitis B) waxaa fudud in ay xanuunka u gudbiyaan shaqsi kale, xitaa haddii qofka xanuun sidaha ahi uusan dareemeyn wax xanuun ah. Qaababka la isugu gudbiyo Cagaarshowga (Hepatitis B) waa xanuun isu gudbintiisu aad u fududahay, waxyaaba lagu kala qaadana waxaa ka mid ah: Galmada, Hooyada qabta oo dhalmada
ugu gudbisa ilmaheeda, Dhiig qof qaba oo lagu shubo qof caafimaad qaba ama taabta meel boog ah, Cirbadda la isku duro, oo la wada isticmaalo qof qaba iyo mid aan qabin, Maqasyada iyo Makiinadaha lagu wada xiirto timajaraha iyagana waa lagu kala qaadaa haddii aan la nadiifin. Maxaa lagu garan karaa qofka xanuunka qaba? Waxaa lagu garan karaa Cagaarshowga Astaamaha soo socda, walow ay dhacdo in dadka qaar ay xanuunka qabaan iyagoo aan iska dareemin calaamadahaan: Qofka oo dareema lafaxanuun badan, Daal fara badan, Is xoqqid joogto ah, Miisaanka qofka oo hoos u dhaca, Indhaha qofka oo jaalle (hurdi) noqda, Midabka kaadida oo jaalle noqda. Dadka qaar marka uu xanuunka Cagaarshowgu ku dhaco, aad ayay u xanuunsadaan ka dibna way ka raystaan, dadka noocaa ah dib ugama soo noqdo xanuunka, oo jirkooda ayaa samaysta difaac ka hortaga fayruska, oo haddii uu xanuunku dib ugu soo noqdaan difaacaas ayaa ka gaashaamaya fayruska kana adkaanayaa sidii horeba. Qofka isaga shakiyaa in uu xanuunka Cagaarshowgu hayo (Hepatitis B) waa in uu isa soo baaraa, oo dhiig iska qaadaa, haddii uu ogaado in uu xanuunku hayo, waa in uu ku dadaalaa inuusan xanuunkaa ku faafin dadka uu la nool yahay, ee xaafadda la deggen. Sidoo kale, guud ahaan ka ilaaliyo mujtamaca kale in uu xanuunkaa u gudbiyo, iskana jiraa in uu la isticmaalo dadka waxyaabaaha aan horay u soo xusnay, hooyada uurka lehi waa in ay u sheegtaa dhaqtarka si looga badbaadiyo ilmaha xanuunkaa. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in lagu dadaalo tallaalka (Hepatitis B) kaas oo ruuxa ka difaacaya in xanuunkaas la qaadsiiyo, isla markaana waxaa habboon, in tallaalka ay qaataan dhammaan qoyska, haddii uu jiro shaki ah, in ruux ka mid ah qoyska, oo xanuunka qabo waayeel iyo caruurba. Cagaarshowga waxuu ka mid yahay cudurrada Soomaalia hadda sida saa’idka ah ugu faafay, walib dagaalladi ka dib. Dad aan qiyaastooda la hubin ayaa qaba, oo waxay inta badan soo baxdaa iney qabaan xanuunka cagaarshowga, marka ay dibadaha tagaan, sida qaaradda Yurub, Amerika iyo Asrutaliya. Waxaan la soconnaa in aysan jirrin Soomaaliya wasaarad caafimaad ee dadka diiwaan galisa, kuna baraarujiso ama qorsheyso tallaalo guud si looga hortaga cudurkan, taasna waxay adkeyneysaa la socoshada faafidda cudurka iyo inta shaqsiyaad ee qabaa cudurkaas, oon la aqoon. Ma ahan cudur lagu daaweyn karo in dab la isku dhajiyo qofkii qabay cudurka maqaarka laga gubo. Taas waxba ma daaweyso, oo sidaan hore u soo sheegnay, ma ahan cudur maqaarka ku dhaca, ee waa cudur dhiigga iyo dheecaanka gala. Marka waa iney ku baraarugaan dadkeenna sida looga hortagi lahaa cudurkan iyo waliba qaabkii lagu xakameyn lahaa.
SICIR BARARKA BISHA SOON IYO CABASHADA DADWEYNAHA W/Q: Laylo Qaali Cabdullaahi | layloqaali60@hotmail.com Ganacsatada suuqyada Soomaaliya, ayaa qiimaha cuntada daruuriga ah sida Burka, Sonkorta, Saliidda, Bariiska, Khudaarta, Timirta, Hilibka iyo Caanaha, kor u qaada Xilliga Bisha Barakeysan ee Rabadaanka. &quot;Qiimaha Cuntada ayaa si la dareemi karo kor ugu kacday markii loo fiiriyo bisha Soonka ka hor&quot; Ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada suuqa Bakaare, mar uu la hadlayay wargeyska Goballada Dhexe. Qiimaha Cuntada ayaa kor u kacay in kastoo uu jiray codsi Rabadaanka ka hor uu Ganacsatada ka codsaday Madaxwayne Xasan Sheekh; inaysan qiimaha kor u qaadin. &quot;Inaga oo soo dhawaynayna bisha Rabadaan, ayaan waxaan ka codsanayaa dhammaan ganacsatada in aysan kor u qaadin qiimaha cuntada daruuriga ah. Waxaan kale oo dhammaan Soomaalida ka codsanayaa in ay is kaalmeeyaan, naxariisna ay dhexdooda isu muujiyaan&quot; ayuu
yiri Madaxweynaha June 7-deedii. &quot;Waxaan ka codsaday in ay kaalmeeyaan kuwa kaalmada u baahan, ayna ka shaqeeyaan dhismaha iyo xoojinta midnimada qaran.&quot; Ayuu sii raacsaday. MW Xasan ayaa sheegay in xilliga Rabadaanka, ay dawladdu dhimi doonto canshuurta la saaro Cuntada la soo dhoofsado, ee ka soo dagta Dekadda Muqdisho, waydiistayna in milkiilayaasha ganacsiga ay lacagtaas laga dhimay qiimaha kaga yareeyaan macaamiisha. In kastoo hoggaanka dalku ka dhawaajiyay in qiimaha aan sara loo kicin, ayaad haddane daremeysaa inaanu warkaas wax saameyn ah haba yaraate ka muujin ganacsatada. Ganacsatada waaweyn iyo kuwa kale tafaariiqleyda ah, ee Bakhaarada ku leh caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalka, ayaa badanaa lagu eedeeyaa inay sabab u yihiin kor-u-kaca raashinka xilliga Bisha Rabadan, kana faa’idaystaan baahida
dadka, hase yeeshee, eedeyntaas ganacsatadu wax dhag ah jalaq uma siiyaan. Geesta kale, qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Caasimadda Muqdisho, oo u warramay Wargeyska Goballada Dhexe, wakhti ay ka adeeganayeen suuqa, ayaa ka warramay heerka sicirka iyo maceeshadda, oo ay cabasho xooggan ka muujiyeen. Waxaana dadka ka mid ahaa Maxamuud, oo ku dooday in dhibaatada kaliya, ee ummadda haysataa tahay, sicir- barar baahsan, oo noloshooda saameeyey. “Dhibaatada kaliya ee Ummadda maanta haysataa waa sicir bararka raashinka cuntada-daruuriga ah, markaa anigu muddo badan maan arag maceeshad jaban, wax ku sii kordha mooyaane. Runtiina haddii maanta iyo barrito laga hadlana cid wax ka qabanaysaa majirto. Iyadoo markii horeba qaali ahayd ayaa haddana ganacsatada Soomaalidu ay wax walba saro u qaadaan Bisha Rabadaan ee khayrka leh, hadday tahay dharka iyo waxy-
aabaha kale ee noloshu ku xiran tahay. Waxa meesha ku dhintay waa danyartii, cid ka naxaysaana ma jirin iyo xukuumad ka qabata ganacsatadan danaysanaysa,” ayuu yiri. Hooyo Fadumo, waa hooyo soomaalyeed, haysata siddeed carruura, kuna xoogsato garabkeeda, iyadoo waxii ay soo heshana ku korsato carruurteeda waxay tiri; “Xukuumad kasta oo timaadda, waxba kama qabankarto ganacsatada, oo Tijaar yar, oo kooban ayay u af-duuban tahay, iyagaana maanta ka awood badan Dawladda, markaa waxaanu Illahay ka baryayna inuu na siiyo ganacsato Ummaddeeda u naxaysa, oo Illaahay ka baqanaysa”. Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxey caado ka dhigteen in ay Rabadaan walba dadka masaakiinta ah, ku soo rogaan cuna qabateyn xagga maciishada ah, ayagoo sicirkii laba laaba.
MUDANE IYO MARWO CALOOSHA IYO CAQLIGA KALA CELIYA W/Q: Xassan Kaafi Xalane | xasankaafi334@gmail.com Talo ku socota xubnaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug, ee dhawaan la dhisay. Murti baa leh; “Tlao adigaa ku nool, ee ayadu kuguma noola” mid kalana, waxey leedahay: “Taaladaan la ruugin, waa lagu rafaadaa!” Mid kalana waxey leedahay: “Talo iyo tiirba, waa la cuskadaa”. Isla Mahmaaho kale, oo aan tii hore ka fogeyn ayaa dhaheysa: “Markaan tabar haayay , talo ma heyn, haddoon talo haayana, tabar ma haayo!”. Dhammaan intaas, oo howraarteenna suubban iyo hoga tusaaleynle, macnaheedu ma ahan in aad iga garasho iyo fahan yartihiin, ee waxaan jecleystay, in aan idin la wadaago, maadaama, dalka iyo dadkuba naga wada dhexeeyo, meel aan ku kala tagnaana aysan jirin, waxaa muhiim ah in aan tashanaa, si aan ku gaarno halka aan higsaneynno oo ah; in aan helno, maamul suubban, kuna dhisan cadaalad iyo sinnaan. Nabadgalyo waarta si aan u helno, caafimaad lacag la&#39;aan ah, waxbarsho bilaash ah, biyo nadiif ah, koronto ku filin, deegaanka dhismaha, waddooyinkii ballaabay iyo dhismaha kuwa horle, yag-
leelidda dakadaha iyo dayactirka xarumaha danta guud ee burburay, intaas iyo inka sii badan, oo dhammaantoodba u muhiim u ah aasaaska nolosha, waxaa lagama maarmaan ah, si taasi loo gaaro, in maamulka lagu howllan yahay laga ilaaliyo, wax kasta, oo dhibaata u keeni kara, sidoo kalana waa, in aan si wadajira uga hortagnaa, cid kasta, oo carqalad ku ah nabadda bulshada, si guud iyo si gaaraba. Dadka gobollada Galguduud iyo Mudug, waa dad garasho iyo awood qaybi fiican muujiyey, marka lo fiirdho qaab dhismeedka maamullada kale ee dalka, gaar ahaan, kuwii dhawaan la dhisay, marka, waxaan ku talin lahaa marka hore, in la baadi goobo, oo lagu soo daro beelaha ka maqan shirka waa hadii ay ayba maqan yihiine, hadii ay jiraan, dad ka ka biya diidsan hannaanka shirka loo wadana waxaan ku talin lahaa, in la qanciyo. Waxaan kaloon ku dari lahaa, in si cadaalad iyo sinnaani ku jirto, loo qeybsado laguna heshiiyo wax walba, oo dadka u dhexeeya, si uu noqdo maamul waara, oo ay ku diirsadaan dadka gobollada Galguduud iyo Mudug.
Golaha wakiillada maamulka Galmudug, ee dhowaan loo dhaariya xilka, waxaan idin leeyahay; maanta ayay talo idinla gudboon tahay. Waxaad ogaataan mudanayaal iyo marwooyin, haddaad manta caloosha wax ka doorataan, waxaad mugdi iyo hogdheer ku riddeen shumaca ama iftiinka maanta ka iftiimaya gobollada Galgaduud iyo Mudug iyo rajada dadka ku jirta, ee maamul. Haddaad Caqliga, fahanka iyo garasho dheer wax ku doorataan, oo ninka aad dooraneysaan aad dhahdaan; muxuu ka badali karaa? Muxuu soo kordhin karaa? Muxuuse ka qaban karaa xaaladda dhaqan dhaqaale ee dadka iyo dalka? Wxaad taariikhda ka gali doontaan baal muuqda iyo dhalo dahab ah. Fadlan, Mudane iyo Marwo, adiga ayaa maanta wax badali kara, ee caloosha wax ha ka doorran, ee Caqliga wax ka dooro! Mudane iyo Marwo Caloosha iyo Caqliga kala celiya!
XADKA XURRIYADDA W/Q: Cabdiraxmaan Faarax Xaashi | awale31@hotmail.com Xurriyaddu, waxa ay ka mid tahay, waxyaabaha qofku haysto, wax ugu qiimaha badan, sidaa darteed, marka xurriyaddiisu naaqusto, ama qofka laga xayuubiyo xurriyaddiisa qofeed, shaqsigu, wax uu isku dayaa, in uu ka tago meesha xurriyaddiisu ku lumayso, oo uu baadigoobo, goobo kale, oo dhaanta barta markii hore xurriyadda looga qaaday. Dadku sinnaan ma gaaraan, haddii xurriyad aysan haysan; dadk goobayo, in ay sinnaan helaan, xurriyadda horteed, sida uu ku doodayo Milton Friedman “Waxa ay noqdaan kuwa xurriyad iyo sinnaan toona helin!”. Markii ay soo ifbaxday, doodda la xarriirta xurriyadda shaqsiga, oo geedkeedu billaabay in xididdadeesu si qotadheer dhulka u galaan, waxaa sidoo kale, barbarsocday doodda la xariirta waxyaabaha laga yaabo, in ay xurriyaddaas cabburiyaan, cuuryaamiyaan ama naaqusiyaan. Haddii dadku xurriyaddooda faraha looga qaado, ayada oo aysan jirin cid kala ilaalisa, isku-dhaca xurriyadahaas kala jaadka ah, waxaa imaanaysa in qof waliba in waxa uu doono sameeyo, taa nafteedana ay keento, in rabitaanka kala duwan, ee dadka iska-horyimaado, ayna soo ifbaxdo Xaalad dagaal, oo dadka, oo idil ka dhaxaysa! waana xaaladda ay falaasifadu u bixiyeen “Xaalka dabeecadda ah” ama “State of nature”. Si haddaba looga gaashaanto, in la maquurto xaaladdaas, oo wax walba, oo dadka qaali ku ah salfanaysa, ayaa dadku waxa ay raalli
ka noqdeen, in ay galaan heshiis bulsho, kaas oo ay kaga tanaasulayaan qayb ka mid ah xurriyaadkooda qofeed, waxa ayna uga tanaasulayaan qeyb ka mid xurriyadahooda jiho fulisa heshiiska ay gaareen; jihadaasna waxa ay noqon kartaa dawlad, qanuun guud ama xukun ay iyaga samaysteen. Qofka Bin Aadamka ahi, ma rabo wax kasta, oo xadaynaya xurriyaddiisa isaga oo ictiraafaya, isla markaana helitaanka iyo jiritaanka nidaam dowladeed, qanuun kala haga ishardinta ka dhalata xurriyadaha kala duwan, ee xubnaha ka tirsan bulshada iyo kala-dambayn baahsan waa muhim, aan laga maarmin. Liddi isku ahaanshaha kan la xukumayo iyo kan wax xukamayo, waxay ay noqonaysaa mid cirka isku shareerta, markasta oo saammiga siyaasadeed, ee noloshu korarto, waa markasta oo ay korarto, awoodda cidda xukunka haysta, ee ku aaddan arrimaha dadka la xukumaya. Dawladdu waxa ay ciyaartaa laba door, sida uu qabo James Buchnan: Midda hore waa, tan qusaysa hirgalinta nidaamka dastuuriga ah, ee dawladi u taagantahay, sidii ay dhowri lahayd; midda xigtana waa, qaybinta iyo baahinta waxa uu ku tilmaamay James buchnan “Badeecadda guud” sida: baahinta qanuunka u dagsan dawladda. Waxa uu Buchnan faahfaahin ka bixinayaa, lammaan ahaanshaha labadaas shaqo, ee dawladda laga rabo, wax ayna abuuraan, ayuu leeyahay, jaah-wareer iyo is-afgaranwaa! Qanuunku waa “badeecad guud” kaas oo ay
DHIBAATADA CUDURKA QAAXADA
ku gadaamanyihiin dhibaatooyin soo jireen ah, oo xariir la leh sidii loo heli lahaa hoggaansanaan mutadawacnima leh. Dabcan, waxa ugu weyn, ee si cad u qeexaya xurriyadda shaqsiga ah waa; Hantida shaqsiyeed “property rights”. Asaaska caqli ku salaysan hantida shaqsiga ah, waxa ay ka dhalatay baahida caalimiga ah, ee ku aaddan, sidii loo sameeyn lahaa, xad cad, oo u dhaxeeya, waxa lagu yeero; Waxayga iyo wixiisa “mine and thine”. Si looga baxsado adduunka ku salaysan khilaafka loo yaqaan; khilaafka Hobbes “Hobbesian conflict” sida uu sharraxayo James Buchnan, waxaa loo baahanyahay in si aan caad saarnayn loo bayaaniyo, xaqa qofka ee ku aaddan walxaha uu falayo. Tusaale, qofku waxa uu xaq u leeyahay, in uu timihiisa dheeraysta, taas oo macnaheedu tahay in dadka kale, aysan xaq u lahayn in ay timaha ka jaraan, se xaq u ma lahan in timihiisa Injir ku dhalato, maxaa yeelay, Injirta dhibteedu waxa ay saamenaysaa dadyowga kale, ee isaga la daggan ama meel kula nool. Waxaa taa la mid ah, lahaanshaha dhulka. Qofka dhulka gaarka ah leh, waxa uu xaq u leeyahay in uu u diido dadka kale in ay hawl ka fushaan dhulkiisa, iyaga oo aan oggolaansho ka haysan isaga, sida; ugaarsashada, beerashada i.w.m, marka laga reebo hay’adaha danaha ama manfacaadka guud bixiya, sida; hay’adaha biyaha, korantada i.w.m.
W/Q: Xassan Kheyrre | hasanbiday@hotmail.com Adkeysi jeermiska sababa cudurka Qaaxada, ee u yeesha daawada, ayaa si aad uga baahayo dalka, sida ay tilmaameyso daraasad ay sameeysay Hey&#39;adda Caafimaadka Adduunka. Cuddurka Qaaxadu waa cudur uu sababo jeermis loo yaqaanno &quot;Mycobacterium&quot; oo badanaa ku dhaca sanbabbada iyo xubbno kale ee jirka. Jeermiskan sababa cuddurka Qaaxada ayaa adkeysi u yeesha labada daawo ee ugu awoodda badan, safka horana kaga jira daaweynta cudurka, kuwaas oo kala ah isoniazid iyo rifampin. Tayada daawada; daawada aan la dhammeysan iyo aqoonta daryeel bixiyaasha, ayaa saameyn ku leh Adkeysiga jeermiska sababa cudurka Qaaxada ee dalka. Baahsanaanta Qaaxada, u adkeysata daawada, waa mid aad u weyn. Daraasaddan
ayaa lagu ogaaday 500 qof, oo adkeysi u leh daawada, oo ku sugan dalka. 5.2% dadkan ayaa dhowaan laga helay cudurka Qaaxada, halka 40.8% hore looga daaweeyay cudurka. Adkeysiga daawooyinka, ee cudurka Qaaxada, waxaa loo arkaa, walaac ka soo shaac baxaysa Somaaliya, marka lala barbardhigo, daraasad laga sameeyey dalka deriska nala ah Itoobiya iyo dalalka gobolka bariga Mediterraneanka. Sanadkii 2005, dalka Itoobiya adkeysiga daawada cudurka Qaaxada ayaa gaaray 1.6% dadka dhowaan laga helay Cudurka iyo 11.8% kuwa hore looga daaweeyay cudurka. Dhinaca kale, daraasad laga sameeyey dalalka gobolka bariga Mediterraneanka, ayaa xuseysa qiyaasta tirada 3.4% dadka dhowaan laga helay cudurka iyo 29.9% kuwa hore looga daaweeyay cudurka.
Habka ugu muhiimsan, ee looga hortago adkeysiga jeermiska keena cudurka Qaaxada, waa in ay bukaannadu u qaataan dhammaan daawooyinka, sida uu qoray daryeel bixiyaasha caafimaadka iyo in daawada la dhammeysto oo aan la kala goyn . 1 Xarun oo lagu baaro, laguna daaweeyo bukaannada u adkeysta daawada, ayaa ku taallo Soomaaliya, haddaba, dowladda ayaa looga bahaanyahay in tallaabooyin deg-deg ah ay ka qaadato arrintaan, si bukaannadu u helaan daawo iyo baaritaan. Sidoo kale, waxaa muhim ah helitaanka safka laabaad, ee daawada cudurka Qaaxada iyo in la tababbaro daryeel bixiyaasha caafimaadka, kuwaaso caawin kara si looga hortago Qaaxada daawada u adkeysata.
Wargeyska Gobollada Dhexe - Luulyo 2015
Wargeyska Gobollada Dhexe, waa Wargeys bille ah, oo ka faallooda arrimaha gobollada dhexe, kana soo baxa magaalada Dhuusa Mareeb (Dahar Dheer).